Kabaha fur furka mink
Fashion Hagaha alaabada
Dhowaan, dhar dhogor-gaaban oo xubin ka ah xubno ka mid ah ayaa helay sumcad weyn. Ka dib, dharka iskutallaabta ah waa doorasho aad u fiican oo loogu talagalay kuwa aan qoondayn karin lacag badan oo ah iibsiga jaakad furan, maaddaama ay had iyo jeer u muuqdaan kuwo ka raqiisan moodooyinka caadiga ah, inkasta oo laga sameeyey dhogor tayo leh. Intaa waxaa dheer, sababtoo ah xaqiiqda ah in marka la jaro dhar dhogor ah oo si qaas ah loo qoondeeyey, oo aan dheereynin, dharka dhogorta ayaa ku soo baxa muuqaal muuqaal leh, maaddaama meelaha la isku midka ah ee maqaarku ay muuqdaan. Guud ahaan, muraayadaha dhogorta leh ee minku waxay leeyihiin dhamaan sifooyinka si ay u noqdaan kuwo caan ah, sidaas darteed lama yaabi in dharka dhogorta ahi aysan ahayn hal xilli ciyaareed oo isbeddel ah, iyo dumar badan oo moodhku ka doortaan doorashadooda, illoobaan muddo horey u yaqaan classics.
Sidee loo doortaa jaakad dhogorta leh?
Style. Qaabka ugu wax ku oolka ah wuxuu u eg yahay dhar dhogor ah oo dhexdhexaad ah, maaddaama ay la mid tahay in la jeexay sida qaabka, oo ah dharka gogosha loogu talagalay, waa mid la ogaan karo. Laakin guud ahaan, jeebka dhoobada ah waa lagama maarmaanka u ah xannaanada oo dhan, sababtoo ah qaabka khalad ah ee la doortay ayaa si muuqata u arki kara qaabka laga soo bilaabo khadadka siman. Sidaa daraadeed, gabdhaha boodboodka ah waxay dooran karaan, tusaale ahaan, jaakad dhejis ah oo leh shandado gacmeed iyo dherer dhaadheer ama sannadka koollo dhoobo leh, oo la rakibay oo waxoogaa yaraaday. Sidoo kale jiilaalka waxaa ugu wanaagsan in la doorto jaakad dhogorta leh oo daboolan, sida moodhadhka furuhu ma aha oo kaliya doorka muuqaal qurux badan, laakiin sidoo kale si fiican ayuu u kululaa.
Tayada. Dabcan, inta aadan iibsan, hubi tayada dhogorta. Minku waxaa lagu gartaa saqafka cufan, sidaas darteed haddii aad ka qabatid khadka koritaanka, dhogorta ayaa isla markiiba ku soo laaban doonta booskeeda. Laga soo bilaabo jaakad dhogorta waxaa jiri doona ur aan fiicnayn. Iyo hubi inaad eegto dhinaca dambe ee maqaarka. Caadi ahaan wax soosaarayaasha dharka dhogorta leh ee tayo sare leh ma dhejin karo qaybta ugu hooseysa ee badeecada ka hooseysa waxa ay ahayd mid suurta gal ah in la jaleeco. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in tan la sameeyo adigoo iibsanaya jaakad iskutallaab ah, sababtoo ah waa inaad hubisaa in seeraha isku xira xashiishyada ay wanaagsan yihiin oo aysan jebin doonin xilli ka dib iibsashada.
Heerka midabka. Maaddooyinka dhogorta madow ee madoow ayaa ah kuwa ugu wax ku oolka badan oo aad u fekeri karto. Marka hore, dhogorta madow ma aha mid si dhakhso ah u wasakhaysan, sida iftiinka. Marka labaad, wuxuu arki doonaa si aad u sii dhigno xajmiga aad u xiisa badan. Sidoo kale waa lagama maarmaan in la ogaado raaxada xaqiiqda ah in jaakad dhogorta madow la gashan karo dhar dhogor ah oo leh dhar kasta oo midab leh, oo aan ka baqeynin in aan la isku darin. Laakiin wax yar oo xiiso leh, dabcan, iyo jilicsanaanta dhogorta ee mink ah ee cawl, midab madow iyo midab beige ah. Waxay caadi ahaan yihiin kuwo aad u qurux badan, oo kala duwanaansho ah ee loo yaqaan 'pastel'. Intaa waxaa dheer, qorshaha midabkani wuxuu si fiican u xoojinayaa qaabka iskuduubka iyo dhogorta furan. Inkastoo gabdhaha badan, dabcan, waxay doorbidaan muraayadaha dhogorta leh. Dhibaatadooda ugu weyni waxay tahay in dhogorta iftiinka uu si dhaqso ah u dhaqdo, sidaas darteedna way adagtahay in la daryeelo marka loo eego, tusaale ahaan, madow. Laakiin waqti isku mid ah, waa in la ogaadaa in dharka midab-madow ee muraayadda ah uu u muuqdo mid cajiib ah, dhedhexaad iyo cadeeyn. Sidaas awgeed faa'iido ayey u leedahay, inay ka sii darayso faa'iido darrada.
Hooska galbeedka waxaad ka arki kartaa sawirada noocyada kala duwan ee jilicsanaanta dhogorta ee jilicsanka mink.
Kabaha Brown - waxaan sameynaa muuqaalo sawir leh kabo buni ah
Muraayadaha dhogorta leh ee kaamil ah
Dharka cagaaran - xulasho qaabab iyo sawirro la yaab leh
Dhaqdhaqaaq joogto ah oo leh saameyn soo jiidasho leh
Qodobbada dharka loogu talagalay haweenka - moodooyinka ugu casriyeysan iyo kuwa casriga ah
Dhar jilicsan - yaa raacaya waxa la xirayo iyo sida loo abuuro sawirro cajiib ah?
Dharka dumarka leh dharka
Abaabulaha sahayda xafiiska
Chloe Moretz iyo Brooklyn Beckham
Saqafyo badan oo ka soo jeeda qoryaha
Magacyada timaha dumarka
Sidee loo doortaa cunug Jaad ah oo Jarmal ah?
Qalabaynta ciddiyaha - sababta iyo daaweynta
Nooca caloosha inta aad uurka leedahay
Barida dadka waaweyn dabaasha
Eggplants for jiilaalka - cuntada ugu fiican ee biilasha basbaaska
Hargabka doofaarka - ka hortagga iyo daaweynta
Waa maxay riyadii gumeysiga?
Dib u soo celinta maraq kaabajka jiilaalka - cuntada sida caadiga ah
Wiilkii Bruce Lee
Daaweynta meningitis ee carruurta
Qorshaha rikoodhka ah ee aqalka gaarka ah
Dhirta cadaadiska hooseeya
Dhunkasho filimka "Fast and Furious 8": fikradaha ayaa loo qaybiyey
35 sawiro cajiib ah oo ka socda muuqaalka shimbir ee indhaha
Imtixaanka uurka leh ee iodine